Ikhaya eliSitayile kwi-Emaar Square W/ Ijim kunye nePhuli yangaphandle
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguUrban Stays
IBHALKHONI IYAPHUMA INKONZO! Hlala kolu luntu luqhagamshelene kakhulu kumbindi wesixeko saseJeddah, kukubeka imizuzu elishumi okanye ngaphantsi ukusuka kwiindawo ezibalaseleyo zeJeddah, izinto abazithandayo zasekhaya kunye neemfihlo zabo ezigcinwe kakuhle. Chitha usuku eJeddah yezeMbali (i-Al-Balad), umangaliswe sisithethe soyilo esahlukileyo, kubandakanya nezindlu zeenqaba ezakhiwe ngasekupheleni kwenkulungwane ye-19, okanye ukuntywila ilanga kwindawo yedama elingaphandle.
Eli gumbi linegumbi elinye yindlu ethambileyo, yeJeddah yangoku, ebonisa ngokugqibeleleyo ukuphucuka kunye nesimbo sesixeko esijikelezileyo. Inebhara edibeneyo / indawo yokutyela, enesofa enkulu, kunye nezitulo ezihamba kunye neTV. Ikhitshi lendlu ifakwe ngokupheleleyo kuzo zonke izinto eziyimfuneko zokuhlala ngaphandle komthungo.
Igumbi lokulala eliphambili linebhedi enkulu ephindwe kabini enebhedi ephezulu, izibane zokufunda kunye neetafile ezisecaleni kwebhedi. Kukho iiwodrophu ezifakelwe ngesisa kuzo zonke izinto ezibalulekileyo zeholide yakho kunye nesinxibo kunye nesipili, umnyango weglasi webalcony wokuphuma okusebenzayo/ukungena ukonwabela ukubanda kwakho kwangaphandle igumbi lokuhlambela eline-en-suite enekhabhathi eyahlukileyo.
4.77 ·Izimvo eziyi-22
I-Emaar Square inokucingelwa njengeyona Manhattan kaJeddah, eyakhiwe njengeziko lesango lesi sixeko sigqubayo, ngoku ibamba ulwandiso olutsha lwendlela yamanzi ukuya kwiPersian Gulf, kwiDubai Creek; uphawu lwexesha elidlulileyo laseDubai kunye nekamva layo.
IJeddah eyi-Histroic engummelwane, uphuhliso lwe-Emaar Square lubekwe ngokugqibeleleyo kwimizuzu emi-5 ukuya e-Al-Andalus Mall, imizuzu esi-7 ukuya e-Al-Salaam Mall kunye nemizuzu eli-10 ukusuka kwiYunivesithi yaseKing Abdulaziz eyaziwa kakhulu.
Kwi-Emaar Square uya kufumana ukonwabela indawo yokuhlala evaliweyo kakhulu, apho uya kuba nakho
I-Emaar Square yindawo yoluntu ebekwe malunga ne-1 yeemayile zokutyela kunye neekhefi. Idlamkile kwaye inobuhlobo nosapho kunye neendawo ezininzi zokuhlala, thatha ikomityi yekofu eStrabucks okanye wonwabele isidlo esinenyama eSteakhouse. Kukho imithwalo yokugcina abantwana bonwabile. Phola ngakwicala lechibi lokuphumla okanye ubile kwindawo yokuzivocavoca yabahlali kuphela. I-Emaar Square yindawo ephila ngokwenene ebusuku kwaye inobuninzi beendawo zokutyela kunye neekhefi.
Umbuki zindwendwe ngu- Urban Stays
Uncedo luya kufumaneka imini nobusuku kuyo nayiphi na imibuzo.
UUrban Stays yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Jeddah